DHAGEYSI XASAASI AH: Booliska Soomaaliya door intee le’eg ayuu ku lahaa Dhimashada Col, Seed oo meydkiisa laga helay Xero ciidan? – Puntlandtimes
DHAGEYSI XASAASI AH: Booliska Soomaaliya door intee le’eg ayuu ku lahaa Dhimashada Col, Seed oo meydkiisa laga helay Xero ciidan?
June 8, 2019 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Faahfaahin dheeraad ah oo kooban ayaa wali ka soo baxaysa dhacdadii uu ku dhintay Sarkaal katirsanaa ciidamada Ammaanka ee Soomaaliya, oo isagoo meyd ah shalay laga helay mid kamid ah xeryaha ciidamada Booliska ee kuyaala caasumada Muqdisho.
Ehelada qaar kamid ah Sarkaalka meydkiisa la helay, isagoo u muuqda ruux is dilay ayaa sheegay in ay caqabado badan ka haysteen dhinaca gurriga uu daganaa oo ay Boolisku amreen in uu ka baxo.
Marxuum Cabdi Cali Seed waxaa uu degganaa isla xerada oo u aheyd halka uu deegaan ahaan si rasmi ah u degganaa, xilka qaadistii lagu sameeyay kadib ayaa amar kasoo baxay Xafiiska Taliyaha Booliiska lagu wargaliyay marxuumka inuu ka guuro xerada.
Cabdi Cali Seed waxaa uu ku dooday sida ay xaqiijiyeen ilo si dhaw ula socday doodaasi, inuu Taliyaha Booliiska u sheegay in aanu haysan meel uu dego, isla markaana ay ii dheer tahay buu yiri “inaan ahay Sargaal xaq u leh inuu helo deegaan uu dego maadaama aanan haysan ilaalo amnigayga sugta.